Kedu ihe bụ ogwe aka na-agba ịnyịnya igwe oyi? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Kachasị mma uwe aka na-agba ịnyịnya oge oyi - ihe ngwọta dị irè
Kachasị mma uwe aka na-agba ịnyịnya oge oyi - ihe ngwọta dị irè
Kedu ihe bụ ogwe aka na-agba ịnyịnya igwe oyi?
Ugwu kacha mma ịgba ígwè n'oge oyi
Ezigbo Ezigbo RoSuwe aka.
Firestorm Na-egosi EluUwe aka.
Santini 365 Mkpụrụ Aka Dị AnyaUwe aka.
Sealskinz Mmiri Na-enweghị AhịrịUwe akana Njikwa Fusion.
Otu Rapha ProUwe oyi.
Assos AssosoiresUwe oyi.
Pụrụ iche Prime Series KwesUwe aka.
(Air Rush) - Nnukwu ihe kpatara na ị ga - enweta aka na ụkwụ oyi bụ n'ihi na mgbasa gị adịghị mma, yabụ gbaa mbọ hụ na akpụkpọ ụkwụ gị agbasapụ ma ọ bụghị akpachapụ anya ka ọbara si n'isi gị banye na mkpịsị aka gị na mkpịsị ụkwụ gị na - aga. You na-achọgharị mkpịsị ụkwụ gị enyi? - Ana m agbalị kwa.
Wiggle wiggle wiggle.- Nwata, o juru! (Rock music) Ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ na-agba ịnyịnya ígwè nọ ebe ahụ ka emebere iji mee ka ụkwụ gị dị jụụ n'oge ụbọchị ọkọchị, nke pụtara nza nke vents oyi na mmiri. Nwere ike iji teepu duct mee nke a.
Mechie oghere ndị dị ka, echere m, ọ bụghị nke ahụ ọmarịcha mma, mana ị nwekwara ike iwepụ ihe nkedo ahụ ma jiri teepu mechie oghere ndị ahụ naanị gị ma nwee ụkwụ dị mma. Zuru oke maka oge oyi. Nri, ọ bụrụ na teepu m anọgide. (Mkpuchi agbasiri ike) (egwu rock) - E nwere ọtụtụ ụdị uwe dị iche iche dịka aka dị iche iche, mana ọ dị oke mkpa na ị nwere kit nke ga-arụ ọrụ n'ọnọdụ ị na-ezube ịga.
Ugbu a ebe a na Europe anyị nwere ike n'ozuzu na pụọ ​​na a mara mma oké ụzọ nke oyi uwe. N'ihi na oyi anaghị atụ oyi ebe a, ọkachasị UK. Na mkpokọta, ọnọdụ okpomọkụ anaghị agbanwe nke ukwuu n'ihe ọ bụla gi.
mee ka ọbara gbasaa na ụbụrụ
Ma ọ bụrụ n ’ibi n’ebe ihu igwe dị njọ karịa ma ọ bụ ebe okpomoku na-agbanwe karịa ụbọchị, ọ ga-adị mkpa ka ị tụlee ihe ọzọ akpụ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ Inner. Yiri uwe na-adaba adaba n'okpuru mkpuchi oyi nke nwere ike iwepụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ gbanwere ma ọ na-ekpo ọkụ n'ụbọchị ma ọ bụ ọ bụrụ na aka gị dị mmiri, dochie akpụkpọ ụkwụ dị n'ime (bass strums) dị n'etiti afọ - ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ a mmiri na oyi na-atụ ụbọchị ebe a na UK na ọ bụrụ na ị chọrọ na-ata ahụhụ site na mmiri na oyi na-atụ aka mgbe a mbanye anataghị ikike ga-enyere gị aka n'ezie na ọ na-agụnye ụfọdụ latex uwe saddlebag mgbe ị prep gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ tinye ya na akpa azụ gị na mgbe mmiri na-ezo, ị na-enweta uwe aka mmiri, tinye ha na nke ahụ pụtara na uwe aka gị nwere ike ịmị mmiri, mana aka gị ga-anọgide na-akpọnwụ nwere ezigbo oyi na onye na-agba gị Ọ bụrụ na ịchefu uwe aka gị, mgbe ahụ i nwere ike mgbe niile gaa a ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ mmanụ ụgbọ gaa na-etinye ha na, Bob bụ nwanne nna gị, e nwere ị nwere. Ọ dị mma, aka na-ekpo ọkụ ma na-akọrọ aka. (Obi ụtọ na egwu music) - Maka ugo - N'ebe ahụ n'etiti gị, ị nwere ike ịchọpụta na anaghị m etinye sọks ọkụ m taa, kama sọks oyi.
Ndị a nwere ihe ikuku na-egbochi mmiri na mmiri, ma ndị a bụ nhọrọ mbụ m, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ohere sọks oyi ma ọ bụ na ị na-agba ọsọ ma chọọ itinye sọks sọks, mgbe ahụ okpukpu abụọ nke ọkwa bụ isi ihe na-eme ka ị kpoo ọkụ . Maka na ị kpọchiri ikuku na-ekpo ọkụ n’etiti n’etiti onye ọ bụla. Naanị ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eyikwasị akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ gị bụ na ọ bụrụ na ịnwe akpụkpọ ụkwụ kachasị sie ike, ọ nwere ike isiri gị ike ịbanye ụkwụ gị.
Ọ bara uru ịnwe akpụkpọ ụkwụ nke abụọ maka oge oyi, nke nwere ike ịbụ naanị ọkara nha ka ibu. (Orchestral Music Na-aga n'ihu) - Usoro GCN ọdịnala iji mee ka ụkwụ gị dị mma ma kpoo ọkụ site na iji ụfọdụ mpempe akwụkwọ aluminom. Aluminom aluminium bu ezigbo insulator nke bu ya mere eji ya esi nri.
Ugbu a jide n'aka na ị ga-enweta ọmarịcha nnukwu mpempe dị ka nke a, kechie ya na ụkwụ gị na nke ahụ niile kwesịrị idobe ọmarịcha mma na ahụ ọkụ pụọ n'ụkwụ gị tọrọ atọ n'ime akpụkpọ ụkwụ gị. Tinye akpụkpọ ụkwụ gị wee nweta overshoes gị ma ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla ma ị nwere ya! Nicekwụ mara mma, na-ekpo ọkụ ma kpuchie ya. Zuru okè maka ọnọdụ okpomọkụ ọ bụla belụsọ ma ọ dị oke oyi ịpụ. (chuckles) (eletriki guitar strumming) - Mgbe a na-achọ hacks iji kpoo ọkụ ma kpọọ nkụ n'oge oyi, ụfọdụ n'ime ndị kachasị dị mfe bụ ndị kachasị dị irè, na n'ezie nke kachasị ọnụ.
Enwere ike ịhọrọ ihe nkiri nri. Enwere ike ịzụta ya dị ọnụ ala na ụlọ ahịa gị, ma ọ dị mfe iji. Just na-agbatị ụkwụ gị niile na ihe dị mma maka ihe nkiri ịrapara bụ na ọ na-arapara n'ahụ ya ka ị ghara iji nke ukwuu.
ọtụtụ vitamin nwere ike igbu gị
Naanị kpuchie ụkwụ gị na nkwonkwo ụkwụ gị mgbe ị na-eyi akwa mkpuchi wee belata oghere maka mkpịsị ụkwụ gị ma nwee ụkwụ na-eduga n'oké osimiri. Kpachara anya, ụkwụ gị ga-agba ntakịrị, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ gaghị ajụ oyi. (Rock Rock) - Ọ bụ otu n'ime oge oyi nke oge oyi, ma aka gị anaghị eme aghụghọ ahụ, na-eme ka aka gị dị ọkụ dịka ịchọrọ.
Ehe, enwere m ezigbo aghụghọ nke uwe m nwere ike igbochi aka gị ịjụ oyi. A na-eme nke a iji gwọọ akwara maka mgbu na ihe mgbu, mana ị nwere ike ịzụta ha na ụlọ ahịa ọ bụla ma ọ bụ ụlọikwuu na ha na-abịa nha dịgasị iche iche ma na-adịgide ruo awa ole na ole ma nwee ike igbochi aka gị ka ọ bụrụ mgbochi nke ice. Ihe ị ga - eme bụ dọka azụ gị, tee ya na aka gị, tinyeghachi ya na aka aka gị, na - ejide n'aka na ihe mkpuchi gị anaghị egbochi ọbara gị.
dike gbaghaara 3 nyochaa
Ya mere, debe ihe niile dị mma, ọbara na-ekpo ọkụ nke na-esi na isi gị ruo n'aka gị mgbe ahụ ị kwesịrị ịnwe mmetụ dị mma na-ekpo ọkụ na aka gị nke ga-eme ka ọ dị mma ma dị ọkụ ruo mgbe ị laghachiri n'ụlọ ma nọrọ n'akụkụ ọkụ. (na-eku ume nke ukwuu) Oh, nke ahụ dị mma.
Chei! (Rock Music) - Ọ bụrụ na oge oyi ndị a niile abụghị oge, mgbe ahụ naanị otu ihe fọdụrụ ime na nke ahụ bụ itinye ego na ngwa ngwa oyi a kwadebere maka ọnọdụ kachasị njọ m na-ekwu maka snow, ice, kpụ ọkụ n'ọnụ Rainfalls na sub-zero okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, booties Fizik Artica R5 ndị ​​a, nke m ga-eyi naanị n'ọnọdụ kachasị njọ, mee ka ụkwụ gị kpoo ma kpọnwụọ maka ọtụtụ ụgbọ ịnyịnya kachasị njọ, njiri ihe na-atụgharị uche, mkpọchi mkpuchi, na ajị anụ n'ime nke pụtara na ha bụ nke gị Mee ka ụkwụ gị kpoo ma kpọọ nkụ n'ọnọdụ ọ bụla. Nanị nsogbu bụ, ọ nwere ike ị chọghị ịnya ọnọdụ ndị a. - Ugbu a, anyị nwere olile anya na ihe ndị a niile enyerela gị aka idobe ụkwụ na aka gị mma na ịnwụ ọkụ na njem ndị ahụ. - Ọ bụrụ n ’ọ masịrị gị n’isiokwu a, nye ya nnukwu isi mkpịsị aka wee mee ka anyị mata ma ọ bụrụ n’echiche na anyị tufuru ihe ọ bụla.
Tinye ya na nkwupụta ndị a n'okpuru ihe. - Na maka isiokwu ndị ọzọ, pịa ala ebe ahụ n'ihi na ọ na-ada mmiri ma na-ajụ oyi ma anyị ga-aga, nri? - Oh, anyị na-eme.- Ugh.
Olee otú m ga-esi mee ka aka m na-ekpo ọkụ mgbe m na-agba ígwè n’oge oyi?
Omume a na-agba ịnyịnya. Ọ bụrụ na ịmalite oyi na oyiaka, ị ga na-alụ ọgụ a ida agha gị mbụ pedal ọrịa strok.
Na-ekpo ọkụisi,aka na-ekpo ọkụ.
Debe ogwe aka gị.
Mechie ihe mkpuchi ahụ.
Ugboro abụọ kechie teepu.
Ime aka na-agba ịnyịnya na-eme ka aka na-ekpo ọkụ?
Oge oyiuwe aka ịgba ịnyịnya ígwèenweghị ihe ijuanya karịa. E nwere a ahia-apụ n'etiti dexterity naima. Ihe kaririuwe akana ndị pere mpemkpịsị akao nwere, nkeọkụyagaịbụ.Mittensdịkacha ekpo ọkụma mee ka gia gbanwee siri ike, ya mere 'lobster'uwe akabụ nkwekọrịta bara uru karị na aigwe kwụ otu ebe.
Kedụ ka m ga-esi mee ka igwe ịgba ịnyịnya ígwè m dịkwuo ọkụ?
Debe gịuwe aka
Agbakwunye ụfọdụ mkpa lineruwe akaga ọnyà a oyi akwa nkekpoo ọkụikuku. Họrọ otu ụzọ na-egosipụta mmetụ ihuenyo mmetụ ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ekwentị gị na ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị ikpughe aka gị na ihe ndị ahụ.
Kedu ihe kacha mma aka iji mee ka aka kpoo ọkụ?
Ọ bụrụ na ị na-achọ kwesuwe akana ndị ọnụ nakpoo ọkụ, na Ozero Kwes -30F Suede Akpụkpọ anụ WinterUwe akabụ nke gịkacha mmanzọ. The Ozero Kwes -30F Suede Akpụkpọ anụ WinterUwe akaNjirimara ise n'ígwé nke ihe na-jigidenke giaka na-ekpo ọkụna akọrọ ke n'okpuru-na-na okpomọkụ.
Kedu ihe mere globster glob ji dị mma?
Ha agbachiterenke ọmama rụọ ọrụukwumaka ịgba igwe kwụ otu ebe n’ihi nkewa nkewa. Ha na-eme ka aka m dị ọkụ karịa mkpịsị aka iseuwe akama m ka nwere ike iji mkpịsị aka aka m maka brakị na ịgbanwee. Ejirila m ha okpomoku n'oge obere afọ.
na-emega ahụ n'ụtụtụ tupu ụbụrụ gị
Kedu oyi dị oyi maka ịgba ígwè?
Maka ụfọdụndị na-agba ígwè, nọkwa aigwe kwụ otu ebena okpomọkụ ọ bụla dị n'okpuru 50 degrees Fahrenheit bụezigbo oyi. Maka kọlụm a, 'ezigbo oyi'akọwapụtara dị ka n'okpuru 32 ogo.
Kedu ụdị okpomọkụ ị chọrọ iji gbaa mbọ?
Inwe ezigbo mkpịsị akauwe akan'ihi na jụụ ụbọchị dị mkpa. N'etiti 8 na 12C (46-54F)M na-ejia mfe arọ windproofuwe akanke ahụ nwere obere mkpuchi. Nke a na - enye ogo ogo, ma na - ezere iji ọsụsọ na - agba mmiri.11.03.2017
ụlọ ọrụ itoolu ụzọ wiil
Olee otú m ga-esi mee ka aka m na-ekpo ọkụ mgbe m na-agba ígwè?
Malite nakpoo ọkụuwe - bụrụ nke na-agbapụta hanaradiator ma ọ bụ na-agbachi aka gịakagburugburu kọfị na-agba ịnyịnya (ma ọ bụ tii). Ọ dị mkpa ịnwe mmiri na mmiri nke ọman'ogeoge oyi, ahụ gị chọrọ ume iji nọrọkpoo ọkụ.
Ndi mkpịsị aka aka 3 kwesịrị ya?
Ruo ọrụ ahụ
Hestra3 mkpịsị akaudauwe akadịuru ego ahụdị ka ihe mgbochi, mkpuchi, akpụkpọ anụ, mmiri na nyocha ikuku bụ ọkwa kachasị elu.
Kedu ihe bụ gloves kachasị mma maka ịgba ígwè?
Ndị a ejiri aka, mmiri na-enweghị mmiri nwere ike ịbụ ego kacha mma $ 45 ị mere iji kwalite ngwa ịgba ịnyịnya oge oyi gị. Ha nwere mmetụta nke uwe aka dị n'etiti nwere oke mkpuchi nwere oke zuru oke maka okpomọkụ na-efegharị na oyi. Imirikiti ndị na-agba ịnyịnya ga-ahụ uwe aka ndị a ruru njedebe ha n'ihe dịka 35 degrees F.
Kedu nke kacha mma oge oyi maka ụmụ nwoke?
Ndụmọdụ kachasị mma anyị si n'aka Ozero na ọ bụ ha Men’s winter thermal gloves. Ha zuru oke maka omume n'èzí dịka ịgba ígwè na ịgba ọsọ ma napụta ihe dị mma ma dị mma nke nwere eriri na-agbanwe agbanwe nke na-egbochi oyi, ifufe, na mmiri ozuzo ịbanye.
Gini mere ichoro uwe aka na agba ugbo oyi?
Ebumnuche nke oge a na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya bụ iji mee ka aka gị kpoo ọkụ. Igha agha imegide oyi bu agha agha abuo. Nke mbu gi ga - acho ichota ihe ndi ozo n’èzí, nke putara ikuku na mmiri ozuzo. Nke abuo ha kwesiri igbochi ikpo oku.